Nhau - Musika weMethionine uchikwira munzvimbo yakaderera
Munguva pfupi iri kutevera, musika wemethionine wanga uchishanda mukati mezasi renhoroondo, uye uchangobva kuburitsa. Mutengo wazvino ndiRMB 16.5-18 / kg. Hutsva hwekugadzira zvigadzirwa zvemumba zvinoburitswa zvishoma zvishoma gore rino. Iko kushambadzira kwemusika kwakawanda uye iyo yepasi renji iri kutenderera. YeEuropean musika makotesheni akawira ku1.75-1.82 euros / kg. Inokanganiswa nemitengo isina kusimba yekutengesa uye kukura mukugadzirwa kwemumba, methionine kupinzwa kwakaderera mumwedzi ichangopfuura.
Kubva muna Ndira kusvika Chikunguru 2020, nyika yangu methionine inotengeswa kunze kwenyika inodonha ne2% gore-ne-gore
Zvinoenderana netsika dzinoverengeka, muna Chikunguru 2020, nyika yangu yakapinza matani gumi nemazana matanhatu nemazana matanhatu emishonga yakasimba yemethionine, kuderera kwemwedzi-pamwedzi kwematani mazana mana nemazana manomwe nemakumi manomwe nemana emakumi mana nematatu, kuderera kwegore-gore-gore kwematani 9614.17, kuderera kwe45.35%. Muna Chikunguru 2020, nyika yangu yakapinza matani 1,810 kubva kumafekitori eMalasian, kuwedzera kwematoni mazana masere nemakumi masere nemashanu pamwedzi uye pamwedzi kuderera kwematani mazana masere nemakumi masere nematatu. Muna Chikunguru, kutengeswa kwenyika yangu kubva kuSingapore kwakadonha zvakanyanya kusvika kumatani mazana matatu nemakumi mana nemakumi mana, kudonhedza pamwedzi pamwedzi kwematani mazana mana nemakumi mana nemakumi mana uye kudonha kwegore-gore-gore kwematani mazana matatu nemakumi matatu nemakumi masere.
Kubva munaNdira kusvika Chikunguru 2020, nyika yangu methionine inotengeswa kunze kwenyika yakawana matani 112,400, zvichidzika 2.02% gore-ne-gore. Nyika nhatu dzepamusoro iSingapore, Belgium neMalaysia. Pakati pavo, kutengeswa kubva kuSingapore kwakave chikamu chakanyanya, iine huwandu hwekupinza matani 41,400, huchiita 36.8%. Ichiteverwa neBelgium, iyo yekuwedzera inowedzera vhoriyamu kubva muna Ndira kusvika Chikunguru yaive 33,900 matani, gore-gore-gore kuwedzera kwe 99%. Iyo yekuwedzera yekuburitsa vhoriyamu kubva kuMalaysia yaive 24,100 matani, pasi 23.4% gore-ne-gore.
Indasitiri yehuku inoramba ichirasikirwa nemari
Kana kuwedzerwa kweindasitiri yehuku ikasangana nedenda idzva rekorona, kugona kwekuchengeta huku kune husimbe. Gore rino, varimi vakatambura kurasikirwa kwenguva yakareba. Wepakati mutengo weanotengesa nyama yehuku ndeye 3.08 yuan / kg, pasi 45.4% gore-ne-gore uye 30% gore-ne-gore. Iyo yeAfrica swine fever denda ine yakatemwa imwe nzvimbo yekushandisa uye isina kusimba kudikanwa kwemusika. Haisi chete ma broiler nemazai ari kurasikirwa nemari, asi nyama dhadha hainawo tariro. Munguva pfupi yapfuura, Feng Nan, Secretary-General weChicken Industry Branch yeShandong Animal Husbandry Association, akataura kuti huwandu hwazvino hwemadhadha muindasitiri yedhadha yenyika yangu iri pakati pemamirioni gumi nemana nemamirioni gumi nemana, ayo akapfuura chikamu cheyero yekupa uye kudiwa . Kunyanyisa kugona kwakonzera purofiti purofiti kuderera, uye indasitiri yedhadha iri mumamiriro ekurasikirwa mukati meiyo indasitiri cheni. Iko kuderera kwekurima yehuku hakuna kukodzera kudiwa, uye musika wemethionine uri kudzikira.
Kupfupisa, kunyangwe huwandu hwekunze hwemethionine hwakadzikira mumwedzi yapfuura, zvakataurwa munguva pfupi yapfuura kuti iyo US methionine chirimwa chakamisa kugadzirwa nekuda kwedutu reUS. Nekudaro, zvigadzirwa zvemumba zvinogadzirwa zvawedzera, zvigadzirwa zvevagadziri hazvina kusimba, huku yekurima yehuku ine husimbe, uye kupihwa kwemethionine kwakazara uye kushomeka-kwenguva pfupi Zvakaoma kuchinja.
Kudya Kwemhuka, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm Giredhi, Pharm Giredhi L-Leucine,